inguqulelo 0.3.0 – Bing (MSN) umguquli
EyeKhala 23, 2009 ngokuthi umnikelo 1 amagqabantshintshi
Siyazingca ukongeza inkxaso kolu khutsho ukuya injini translation yesibini. Lo nguye Bing (MSN) umguquleli ngu Microsoft.
Iziphumo lukunikeza zahluke kakhulu kwabo onokulufumana Google translate, ngezinye ngcono, mandundu ngamanye amaxesha.
Ukuwela minor software engagqibekanga kukuba le nkonzo nangoku in beta kunye isimemo kufuneka, Sinento imali encinane kakhulu esinokwabelana ngoko ukuba ufuna enye, amazwana nje kule posi, eza kuqala – kunikwa wakhonza.
ngokunjalo – siye ayenziwanga yasebenza umguquleli Bing njenge engagqibekanga ngumguquleli oluzenzekelayo kodwa ke singathanda ukuziva izimvo zakho kulo. Ukuba abantu ngokwaneleyo ukucela olu phawu, siya kubeka imigudu ukwenza oku kukhupho ezayo. In Kusenjalo – ukuba bamkelekile ukuba uvavanyo olu phawu kule sayithi, ukuqala nje zokuguqula sebenzisa i-Bing iqhosha kuveza.
ifayilishwe Phantsi: izaziso Release ephawulweyo Nge: bing (MSN) umguquli, uphando loshintsho magama, engephi, khulula, Java Wordpress
Judy C uthi
EyeNkanga 25, 2009 ngexesha 12:19 pm
Hi Ndingathanda ukuzama bing ukuguqulela sicela, thina Akukuvuyisi ukwazi global translate violatiing google tos kwaye sifuna ukuswitsha kwaye ndingathanda ukuzama enye.